Daawo..Yaxaas Laqay Diyaarad Drone Ah! | Xaqiiqonews
Daawo..Yaxaas Laqay Diyaarad Drone Ah!
Yaxaaskan oo ku sugnaa haro biyood ku taala magaalada Darwin ee waqooyiga dalka Ustareeliya ayaa liqay diyaaradda xilli ay filim duubeysay.
XAQIIQO NEWS- MUUQAAL
Sida ay sheegtay idaacadda qaranka ee dalkaasi, Yaxaas ayaa waxyeeleeyey diyaaradda intii lagu guda jiray muuqaal duubista filim dukumentiri ah oo laga sameynaayey sanad guuradii 50’aad oo ka soo wareegtay markii la mamnuucay ugaarsiga yaxaasyada.
Yaxaaska ayaa ku booday diyaaradda, ka dibna waxa uu la galay biyaha hoostooda, hase ahaatee diyaaradda ayaa laba todobaad ka dib laga arkay jiinka harada iyada oo ay ka muuqdeen waxyeeladii ka soo gaartay qaniinyadii yaxaaska.
Sidoo Kale Aqri: Daawo..Dhaqtar Naag Kaga Umulisay Qaab Online Ah!